TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Mar 14, 2003
Ø Faalo ku saabsan Xadgudubka Ciidamada Itoobiya ay u gaystan Shacbiga Ogaadeenya.
Ø Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo sheegay in uu Qaramada midoobay u gudbin doono faragalinta ay Itoobiya ku hayso Soomaaliya.
Ø Hogaamiyihii Xisbiga Mucaaradka Medhin oo jagadaii laga qaadey.
Ø Askar Itoobiya ka fakatay oo sheegtay in Itoobiya weerar isu diyaarinayso.
Ø Seddex xisbi oo mucaaradka Itoobiya ah oo midoobey.
Ø Dawladda Suudaan oo ma saafurinaysa dad qaxooti ah.
Xadgudubka Ciidamada Itoobiya ay u gaystan Shacbiga Ogaadeenya.
Gumaystaha Itoobiya waxa uu shacabka Ogaadeenya ula dhaqmaa si aadamaha ka baxsan. Mana jirto cid ku canbaaraysa ama kula xisaabtanta falalka foosha xun ee caadada u ah. Falalka argagaxa leh ee xidhka, garaaca, dilka, kufsashada iyo faro xumaynta, waayitaanka, rarashada iyo sumaynta waa kuwo ka mid nolol maalimeedka shacabka Ogaadeenya. Waxaana sanad walba dil, xidh ama wax yeelo u dhigma lala beegsadaa kumaankun oo ka mid ah. Itoobiya waxa ay si toos bulshada Ogaadeenya oo ga xasuuqataa xoogaaga iyo shakhsiyaadka hormoodka ka ah wadanka. Sida, madax dhaqameedyada, aqoonyahanada iyo dhalinyarada. Tirada isku celceliska ee dadka maalinlaha loo daldalo waa shan iyo toban Ruux. Sida hubaasha ahna, tiradu waa ay sii badataa mar walba oo ay Cidaamada caadisku ay guul daro ka kala kulmaan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO).
Shacabka Ogaadeenya waxaa xarumo kulan u noqoday xabsiyada Itoobiya ee duliga badan. Halkaas oo had iyo jeer lagu ciqaabo iyaga oo laga abaaro laxaadka aasaasiga ah. Tusaale, xubnaha Taranka, Indhaha, Gacmaha, Lugaha iyo inta soo raacda.
Waxaa laga yaabaa in dad badani ay aaminsanyihiin in qarnigan 21aad ayna jirin wax is adoonsi ah, dhab ahaantise, Ogaadeenya heerka ay ku sugantahay dhinacyadeeda qaarkood ka daran Adoonsigii Dunida ka jiray qarniyadii 17aad iyo 18aad. Hadaba, iyada oo ayna soo koobid la hayn gefafka loo gaysto shacabka dulman ee Ogaadeenya ayaanu idinku tusaalaynaynaa qarkood:
Afduubka iyo garab rarashada shacabka Ogaadeenya ee miyi iyo magaalaba waxa ay caado cad u tahay Ciidamada cabudhiska ee Itoobiya oo ku rarta adeegyada ay ku jiraan sahayda, saanada iyo daawooyinka. Waxaana intaa weheliya oo layaab leh, qof lagu rarayo qof, sida dhawaaca iyo maydkooda.
Afduubka iyo adeegsiga Baabuurta Shacabka iyo Dirawalada iyaga oo u isticmaalaya ka baqida iyo ka dhuumashada JWXO ayaa iyaduna ah mid joogto ah..
Talaalida iyo faafinta cudurka dilaaga ah HIV/AIDS iyaga oo ku dhaqangalinaya kufsashada iyo faro xumaynta haweenka, dhalaanka iyo da,yarta. Waxaana dhacda ah in ay xidhaan Gabdhaha dadoodu u dhaxayso 15-25 si ay falalkan u oofiyaan Cidaamada boqolka kun korka u dhaafay ee Ogaadeenya ku sugan.
Hantidhaca, ganaaxa, oodida, sumaynta xoolaha, aasida iyo sumaynta ilaha biyanahana waa kuwo caadi u ah Gumaystaha Itoobiya iyo Ciidamadiisa.
Eegana waxa aynu tusaalooyin kale u soo qaadanaynaa falal ay ciidamada Itoobiya dhawaan ka gaystay Ogaadeenya.
25/2/03, Ceelka Bulaale (Gobolka Dhagaxbuur) oo ka mid ah ceelasha oo gu waawayn ayaa waxa ay ciidamada Itoobiya rusheeyeen iyaga oo isticmaalaya Diyaarada qumaatiga-u-kaca Reer Miyi waraabsanaya xoolahoda. Halkaas waxa ay ku dileen Afar qof oo kala Sadex Dumar ah iyo Wiil yar.
500 oo adhi ah
300 oo lo’ ah
250 oo geel ah
80 aqal oo gubtay
Ceel Xaar (Gobolka Qoraxay) waxa la go’doomiyay sadex maalmood iyada oo looga dhaartay gelitaan iyo ka bixid labadaba isla markaana lagu ganaaxay 50,000 Birr.
5/3/03, Garoonka (Gobolka Doolo)waxaa iyadana lagu dhaawacay nin shacab ah oo la dhaho Muxumed Aw Axmed Cabdi.
4/3/03, Dhanaan (Gobolka Goday) waxa ay ciidamada cabudhiska ku dileen laba nin oo shacab ah, kala ahna:
1. Shaafi Kaad Xuseen
2. Faarax Maxamed Cali
Falalka nooca oo kale ah waa kuwo malin walba ka dhaca degmo iyo gobolka kasta oo ka mid ah Ogaadeenya.
Maxamed Cabdi Xaashi oo ah Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu dhowaan u gudbin doono Qaramada Midoobey warqad qoraal ah uu ku faah-faahinayo xad-gudubka ay Itoobiya ku hayso dalka Somalia.
Qoraalkaas ayuu Wakiilku ku sheegay in aysan suurtogal ahayn in Itoobiya ay tidhaahdo waxaan ka qayb qaadanayaa dib u heshiisiinta Soomaaliya, ayna xadgudub ku hayso Xuduudda Soomaaliya oo ay mar walba si sharci daro ah ku soo gasho.
Dowladda KMG ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah uga hadashay Ciidamada Itoobiya ee u talaabaya Gudaha Soomaaliya, waxayna shaaca ka qaaday in ergadeedu aanay Shirka Keniya uga socda kooxaha soomaaliyeed ka qaybgali doonin inta ay Itoobiya gudaha Soomaaliya ku jirto.
Dhinaca kale warar aanu ka soo xiganay Wargayska Rundnet ayaa sheegay in Saraakiil Itoobiyaan ah ay Booqdeen goobo xaasaasi ah oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
Saraakiishaas ayaa waxaa hogaaminayay Hogaamiye kooxeedka lagu magacaabo Maxamed Dheere oo ku hubaysnaa 8 Gaadhi oo Tikniko ah, meelaha ay booqdeenna waxaa ka mid ahaa: Wasaarada Gaashaandhigga, Warshada Kabista, Dugsiga Booliska iyo goobo kale oo mihiim ah, iyagoo aad ugu dhawaaday agagaarka Isbitaalka Banaadir oo aan ka fogayn Xarunta Madaxtooyada DKMG.
Kornayl Goshu wolde, oo ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Medhin, ayaa xilkii guddoomiyanimada laga qaaday, ka dib markii lagaga shakiyay inuu u debcay cadaadis kaga yimid dhinaca Xukuumada Itoobiya, waxaana lagu eedeeyay inuu kabaydhay siyaasadii mucaaradnimo ee xisbiga.
Kornayl Goshu wolde, oo ahaan jiray ku xigeenka wasiirka arimaha Dibbada xilligii Mingiste Xayle Marayem, wuxuu ahaa ninkii asaasay xisbiga Medhin, waxaana beryahan denbe oo dhan cadaadis ku hayay xukuumada Melse Zenawi, oo doonaysay inay xisbiga ka leexiso khadka siyaasadeed ee uu ku socdo.
War-saxaafadeed xisbiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Goshu wolde laga qaaday xilka guddoomiyanimada, iyo in aanu xisbigu marnaba daba-dhilif u noqon karin maamulka uu Gumaystuhu horkacayo.
Ciidamada Gumaysiga ee Itoobiya ayaa waxaynan ka waantoobin qabanqaabada dagaal ee ay ku jiraan, si ay xukunka u dheeraystaan, sidaas waxaa yidhi Askariga lagumagacaabo Asafe Akala oo isu soo dhiibay wadanka Erateriya. Waxuuna isagoo hadalkiisa siiwata yidhi Dhawaan 170 dhalinyaro ah ayaa tababar loogu diray meesha lagu magacaabo Fatsi oo ku taalla waqooyiga Itoobiya. Taliyaayaasha ciidamada Itoobiya ayaa khaldaya shacabka kana dhaadhiciya in Itoobiya ay leedahay magaalada Badame.
Kasahum Yirmer, oo isna dhawaan is-dhiibay Eritrea wuxuu sheegay in dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 18-30 tababar loogu qaaday xeryo ku yaalla Bir Valley iyo Hurso.
Askartani waxay sheegeen in Gumaysigu uu dagaal galinayo dhalinyarada, waxayna waalidkood ku boorrinayaan in ay dhalintooda geerida ka badbaadiyaan.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen xisbiyada mucaaradka Itobiya oo saldhigoodu yahay Addis Ababa ayaa sheegay in ay midoobeen si ay ugala hortagaan cudud midaysan kaligii taliye Melse Zenawi.
Xisbiyadan midoobey waxay kala yihiin:
1-councel of alternative force for peace and democracy in ethiopa
2-oromo national congress
3-ethiopian unity organization
Xisbiyadani waxay daboolka ka qaadeen inay ku heshiiyeen qodobbo dhowr ah, waxaana ka mid ah magaca ay qaadanayaan oo ah Iskaashiga Dimuqraadiga Itoobiya, waxay kaloo xisbiyadani sheegeen inay mawqif midaysan ka yeesheen siyaasada lagaga soo horjeedo xukuumada Melse Zenawi.
Dawlada Sudaan ayaa masaafurin ku billowday qoxooti 300 gaadhaya oo wadankeeda ku joogay si sharci darro ah waxayna dadkaas qaxootiga ahi u kala dhasheen Somali, Itobiyaan iyo Eritereyaan.
Ilaa iyo hada waxay wasaarada arimaha dibadu diyaarisay waqraaqahoodii masaafurinta 200 oo ka soo galay xuduudka Liibiya, kadib markay Liibiya u diidday inay galaan wadankeeda.
Xoghaya arimaha dibada ee Sudan Caadil Shamsi Al-Diin ayaa sheegay in howsha masaafurinta qaxootigu ay sii socan doonto, wuxuuna dadwaynaha reer sudan ka codsaday in ay soo sheegaan wixii qaxooti sharci darro ah ee ay Wadanka ku arkaan.